07.02.21 Avyakt Bapdada Nepali Murli 29.10.87 Om Shanti Madhuban
तन , मन , धन र सम्बन्धको शक्ति
आज सर्वशक्तिमान् बाबाले आफ्ना शक्तिशाली बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक ब्राह्मण आत्माहरू शक्तिशाली बनेका छन् तर नम्बरवार। सर्व शक्तिहरू बाबाका बर्सा र वरदाताका वरदान हुन्। बाबा र वरदाता– यी डबल सम्बन्धले हरेक बच्चाहरूलाई यी श्रेष्ठ प्राप्तिहरू जन्मिदा नै मिलेका हुन्छन्। जन्मिदा नै बाबाले सर्वशक्तिहरूको अर्थात् जन्म-सिद्ध अधिकारको अधिकारी बनाइदिनुहुन्छ, साथ-साथै वरदाताको नाताले जन्म हुनासाथ मास्टर सर्वशक्तिमान् बनाएर “सर्व शक्ति भव”को वरदान दिनुहुन्छ। सबै बच्चाहरूलाई एकद्वारा समान रूपमा डबल अधिकार मिल्छ तर धारणा गर्ने शक्तिले नम्बरवार बनाइदिन्छ। बाबाले सबैलाई सदा र सर्व शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ तर बच्चाहरू यथाशक्ति बन्छन्। त्यसो त लौकिक जीवनमा वा अलौकिक जीवनमा पनि सफलताको आधार त शक्तिहरू नै हुन्। जति शक्तिहरू त्यति सफलता। मुख्य शक्तिहरू हुन्– तनको, मनको, धनको र सम्बन्धको। चारवटै आवश्यक छन्। यदि चारमा कुनै एक कमी भए पनि जीवनमा सदा र सर्व सफलता मिल्दैन। अलौकिक जीवनमा पनि चारै शक्तिहरूको आवश्यकता हुन्छ।
यो अलौकिक जीवनमा आत्मा र प्रकृति दुवैको तन्दुरुस्ती आवश्यक छ। जब आत्मा स्वस्थ हुन्छ तब तनको हिसाब-किताब वा तनका रोगहरू सामान्य बन्ने भएकाले र स्व-स्थितिको कारणले स्वस्थ अनुभव गर्छ। उसको मुखमा, चेहेरामा बिमारीको कष्टको चिन्ह हुँदैन। मुखबाट कहिल्यै पनि बिमारीको वर्णन हुँदैन, कर्मभोगको वर्णनको सट्टा कर्मयोगको स्थितिको वर्णन गर्छ किनकि बिमारीको वर्णन गर्नु पनि बिमारी वृद्धि गर्ने कारण बन्छ। उसले कहिल्यै पनि बिमारीको कष्टको अनुभव गर्दैन, न अरूलाई कष्ट सुनाएर कष्टको लहर फैलाउँछ। बरू परिवर्तनको शक्तिले कष्टलाई सन्तुष्टतामा परिवर्तन गरेर सन्तुष्ट रहेर अरूमा पनि सन्तुष्टताको लहर फैलाउँछ अर्थात् मास्टर सर्वशक्तिमान् बनेर शक्तिहरूको वरदानबाट समय प्रमाण सहन शक्ति, समाहित गर्ने शक्ति प्रयोग गर्छ। समयमा शक्तिहरूको वरदान वा वर्सालाई कार्यमा लगाउनु, उसको लागि वरदान अर्थात् आशीर्वादले दवाईको काम गरिदिन्छ किनकि सर्वशक्तिमान् बाबाद्वारा जुन सर्वशक्तिहरू प्राप्त भएका छन् तिनलाई जस्तो परिस्थिति, जस्तो समय र जुन विधिले तिमीले कार्यमा लगाउन चाहन्छौ त्यही रूपले ती शक्तिहरू तिम्रा सहयोगी बन्न सक्छन्। ती शक्तिहरूलाई वा प्रभु-वरदानलाई जुन रूपमा चाहन्छौ त्यही रूप धारण गर्न सक्छौ। अहिले भर्खरै शीतलताको रूपमा, अहिले भर्खरै पोल्ने रूपमा। पानीको शीतलताको पनि अनुभव गराउन सक्छौ अनि आगोले पोलेको पनि अनुभव गराउन सक्छौ। शक्तिले दवाईको पनि काम गर्न सक्छ र शक्तिशाली बनाउने हतियारको पनि काम गर्न सक्छ। केवल समयमा कार्यमा लगाउने अथोरिटी बन। यी सर्वशक्तिहरू तिमी मास्टर सर्वशक्तिमानका सेवाधारी हुन्। जहिले जसलाई आदेश दिन्छौ उसले “हुन्छ हजुर” भनेर सहयोगी बन्छ तर सेवा लिने पनि त्यति नै चलाख चाहिन्छ। त्यसैगरी तनको शक्तिलाई पनि आत्मिक शक्तिको आधारमा सदा अनुभव गर्न सक्छौ अर्थात् सदा स्वस्थ रहने अनुभव गर्न सक्छौ।
यो अलौकिक ब्राह्मण जीवन हो नै सदा स्वस्थ रहने जीवन। वरदाताबाट “सदा स्वस्थ भव”को वरदान मिलेको छ। तर बापदादाले देख्नुहुन्छ– प्राप्त भएका वरदानलाई कति बच्चाहरूले समयमा कार्यमा लगाएर लाभ लिन सक्दैनन् अथवा यस्तो भनौं– शक्तिहरू अर्थात् सेवाधारीहरूबाट आफ्नो विशालता र विशाल बुद्धिद्वारा सेवा लिन सक्दैनन्। “मास्टर सर्वशक्तिमान्”– यो स्थिति कुनै कम होइन। यो श्रेष्ठ स्थिति पनि हो र साथ-साथै सीधै परमात्मद्वारा प्राप्त “परम उपाधि” पनि हो। उपाधिको नशा कति राख्छन्! उपाधिले कति कार्य सफल गरिदिन्छ! त्यसैले यो परमात्म-उपाधि हो, यसमा कति खुसी र शक्ति भरिएको छ! यदि यही एउटा टाइतलको स्थिति रूपी सीटमा स्थित रह्यौ भने यी सर्वशक्तिहरू सेवाको लागि सदा हाजिर भएको अनुभव हुन्छ, तिम्रो आदेशको पर्खाइमा हुन्छन्। त्यसैले वरदानलाई अथवा वर्सालाई कार्यमा लगाऊ। यदि मास्टर सर्वशक्तिमानको स्वमानमा स्थित भएनौ भने शक्तिहरूलाई आदेशमा चलाउनुको सट्टा बारम्बार बाबालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ– यो शक्ति दिनुहोस्, यो मेरो कार्य गराइदिनुहोस्, यस्तो होस्, त्यस्तो होस्। प्रार्थना गरिरहनेहरू कहिल्यै पनि सदा राजी रहन सक्दैनन्। एउटा कुरा पूरा हुन्छ, अर्को सुरु हुन्छ। त्यसैले मालिक बनेर, योगयुक्त बनेर युक्तियुक्त सेवा सेवाधारीहरूसँग लियौ भने सदा स्वस्थ रहेको स्वत: अनुभव गर्ने छौ। यसलाई भनिन्छ– तनको शक्तिको प्राप्ति।
त्यसैगरी मनको शक्ति अर्थात् श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमानको हर संकल्पमा यति शक्ति हुन्छन् जुन समयमा जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छौ र गराउन पनि सक्छौ किनकि यस्ताको संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ र कल्याणकारी हुन्छ। जहाँ श्रेष्ठ र कल्याणकारी संकल्प हुन्छन् त्यहाँ सिद्धि अवश्य हुन्छ र मास्टर सर्वशक्तिमान् भएको कारणले मनले कहिल्यै पनि मालिकलाई धोका दिन सक्दैन, दु:खको अनुभव गराउन सक्दैन। मन एकाग्र अर्थात् एक ठेगानामा स्थित रहन्छ, भट्किँदैन। जहाँ चाहन्छौ जहिले चाहन्छौ मनलाई त्यहाँ स्थित गर्न सक्छौ। कहिल्यै पनि मन उदास हुन सक्दैन किनकि ऊ सेवाधारी दास बन्छ। यो हो मनको शक्ति, जुन यस अलौकिक जीवनमा वर्सा वा वरदानमा प्राप्त छ।
त्यस्तै तेस्रो छ धनको शक्ति अर्थात् ज्ञान-धनको शक्ति। ज्ञान-धनले स्थूल धनको प्राप्ति स्वत: गराउँछ। जहाँ ज्ञान धन हुन्छ त्यहाँ प्रकृति स्वत: दासी बन्छ। यो स्थूल धन प्रकृतिका साधनको लागि हो। ज्ञान-धनले प्रकृतिका सर्व साधन स्वत: मिल्छन् त्यसैले ज्ञान-धन सबै धनको राजा हो। जहाँ राजा हुन्छ, त्यहाँ सर्व पदार्थ स्वत: नै मिल्छन्, मेहनत गर्नु पर्दैन। यदि कुनै पनि लौकिक पदार्थ प्राप्त गर्नमा मेहनत गर्नु पर्छ भने त्यसको कारण हो ज्ञान-धनको कमी छ। वास्तवमा ज्ञान-धन पदमापदमपति बनाउनेवाला हो। परमार्थले व्यवहारलाई स्वत: सिद्ध गर्छ। त्यसैले परमात्म-धन भएकाहरू परमार्थी बन्छन्। संकल्प गर्न पनि आवश्यकता हुँदैन, स्वत: नै सर्व आवश्यकताहरू पूर्ण भइरहन्छन्। ज्ञान-धनको यति शक्ति हुन्छ जुन अनेक जन्म यो धनले राजाहरूको पनि राजा बनाइदिन्छ। अनि धनको शक्ति पनि सजिलै मिल्छ।
यसै प्रकारले सम्बन्धको पनि शक्ति हुन्छ। सम्बन्धको शक्तिको प्राप्तिको शुभ इच्छा यसैले हुन्छ किनकि सम्बन्धमा स्नेह हुन्छ र त्यही स्नेहले सहयोगको प्राप्ति गराउँछ। यो अलौकिक जीवनमा सम्बन्धको शक्ति डबल रूपमा मिल्छ। थाहा छ– डबल सम्बन्धको शक्ति कसरी मिल्छ? एउटा– बाबाद्वारा सर्व सम्बन्ध, अर्को– दैवी परिवारद्वारा सम्बन्ध। त्यसैले डबल सम्बन्ध भयो नि– बाबासँग पनि आपसमा पनि। यसरी सम्बन्धद्वारा सदा नि:श्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह र अविनाशी सहयोग सदा नै प्राप्त भइरहन्छ। त्यसैले सम्बन्धको पनि शक्ति छ नि। त्यसै पनि पिताले बच्चाहरूलाई किन चाहन्छन् अथवा बच्चाहरूले पितालाई किन चाहन्छन्? सहयोगको लागि। समयमा सहयोग मिलोस्। यो अलौकिक जीवनमा चारै शक्तिहरूको प्राप्ति वरदानको रूपमा र वर्साको रूपमा छ। जहाँ चारै प्रकारका शक्तिहरू मिल्छन्, तिनीहरूको हर समयको स्थिति कस्तो हुन्छ? सदा मास्टर सर्वशक्तिमानको। यही स्थितिको सीटमा सदा स्थित हुन्छौ? यसैलाई नै अर्को शब्दमा स्वको राजा वा राजयोगी भनिन्छ। राजाहरूको भण्डार सदा भरपुर रहन्छ। राजयोगी अर्थात् सदा शक्तिहरूको भण्डारले भरपुर रहने, बुझ्यौ? यसलाई भनिन्छ– श्रेष्ठ ब्राह्मणको अलौकिक जीवन। सदा मालिक बनेर सर्व शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाऊ। यथाशक्तिको सट्टा सदा शक्तिशाली बन। अर्जी गर्नेवाला होइन, सदा राजी रहनेवाला बन। अच्छा।
मधुबन आउने मौका त सबैलाई मिलिरहेको छ नि? प्राप्त भएको यो भाग्यलाई सदा साथमा राख्नु। भाग्यविधातालाई साथमा राख्नु अर्थात् भाग्यलाई साथमा राख्नु हो। तीन जोनका आएका छन्। अलग-अलग स्थानका तीन नदीहरू आएर मिसिएका छन्– यसैलाई त्रिवेणीको संगम भनिन्छ। बापदादाले त वरदाता भएर सबैलाई वरदान दिनुहुन्छ। वरदानलाई कार्यमा लगाउनु, यो हरेक माथि निर्भर रहन्छ। अच्छा।
चारैतिरका सर्व वर्सा र वरदानहरूका अधिकारी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान् श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा सन्तुष्टताको लहर फैलाउने सन्तुष्ट आत्माहरूलाई, सदा परमार्थद्वारा व्यवहारमा सिद्धि प्राप्त गर्ने महान् आत्माहरूलाई बापदादाको स्नेह र शक्ति सम्पन्न याद-प्यार एवं नमस्ते।
“सर्वको सहयोगबाट सुखमय संसार” कार्यक्रमको बारेमा– अव्यक्त बापदादाको प्रेरणा
यो विषय यस्तो छ जुन स्वयं सबैले सहयोग दिन तयार हुनेछन्। सहयोगले फेरि सम्बन्धमा पनि आउनेछन् त्यसैले आफै तयार हुनेछन्। केवल शुभभावना, शुभकामना सम्पन्न सेवामा सेवाधारी अगाडि बढ्नु पर्छ। शुभभावनाको फल प्राप्त नहोस्– यस्तो हुनै सक्दैन। सेवाधारीको शुभभावना, शुभकामनाको धरनी सजिलै फल दिनको लागि निमित्त बन्छ। फल तयार छ, केवल धरनी तयार हुन थोरै ढिलो मात्र हो। फल त फटाफट निस्कन्छ तर त्यसको लागि योग्य धरनी चाहिन्छ। अहिले त्यो धरनी तयार भइरहेको छ।
त्यसो त सेवा सबैको गर्न आवश्यक छ तर फेरि पनि जो विशेष सत्ताका छन् तिनीहरू मध्येबाट समीप आएका छैनन्। चाहे राज्य सत्तावालाको सेवा भएको छ वा धर्म सत्तावालाको भएको छ, तर सहयोगी बनेर सामुन्ने आऊन्, समयमा सहयोगी बनुन्– त्यसको आवश्यकता छ। त्यसको लागि त शक्तिशाली बाण लगाउनु पर्छ। देखिन्छ– शक्तिशाली बाण त्यही हुन्छ जसमा सर्व आत्मालाई सहयोग गर्ने भावना हुन्छ, खुसीको भावना हुन्छ, सद्भावना हुन्छ। यसबाट हरेक कार्य सजिलै सफल हुन्छ। अहिले जुन सेवा गरेका छौ त्यो अलग-अलग गरेका छौ। जसरी पहिलाको जमानामा कुनै कार्य गर्न जाँदा सारा परिवारको आशीर्वाद लिएर जान्थे। त्यो आशीर्वादले पनि सजिलो बनाउँथ्यो। त्यसैले वर्तमान सेवामा पनि त्यसलाई जोड्नु पर्नेछ। त्यसैले कुनै पनि कार्य सुरु गर्नु भन्दा पहिला सबैको शुभभावना, शुभकामना लेऊ, सबैको सन्तुष्टताको बल भर, तब शक्तिशाली फल निस्कन्छ। अहिले त्यति मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन। सबै खाली भएका छन्। मेहनत गर्न आवश्यक पर्दैन। फुकिदियौ भने उडेर यहाँ आइपुग्छन्, यसरी खोक्रो भएका छन्! आजकल त सबैले बुझेका छन्– अर्को कुनै शक्ति आवश्यक छ जसले कन्ट्रोल गर्न सकोस्– चाहे राज्यलाई होस्, चाहे धर्मलाई। भित्रबाट खोजिरहेका छन्। केवल ब्राह्मण आत्माहरूको सेवाको विधिमा अन्तर चाहिन्छ, त्यही मन्त्र बन्छ। अब त मन्त्र चलाऊ, सिद्धि हुन्छ। ५० वर्ष मेहनत गर्यौ। यो सबै पनि हुनु नै थियो, अनुभवी बन्यौ। अब हरेक कार्यमा यही लक्ष्य राख “सर्वको सहयोगद्वारा सफलता”– ब्राह्मणहरूको लागि यो विषय होस्। बाकीँ दुनियाँको लागि यो विषय होस्– “सर्वको सहयोगद्वारा सुखमय संसार”। अच्छा।
अब त तिमीहरू सबैको सिद्धिको प्रत्यक्ष रूप देखिने छ। कुनै बिग्रिएको कार्य पनि तिम्रो दृष्टिले, तिम्रो सहयोगले सजिलै हल हुनेछ जसको कारणले भक्तिमा धन्य-धन्य भनेर पुकारिरहन्छन्। यी सबै सिद्धिहरू पनि तिम्रो सामुन्ने प्रत्यक्ष रूपमा आउनेछन्। कुनै सिद्धिको रीतिले तिमीहरूले भन्दैनौ– यस्तो हुन्छ, तर तिम्रो निर्देशनले नै स्वत: सिद्धि प्राप्त गराउनेछ। तब त प्रजा पनि छिटो-छिटो बन्नेछन् सबै तिरबाट निस्किएर तिमीहरूतिर आउनेछन्। अब यो सिद्धिको पार्ट चल्नेछ। तर पहिला यति शक्तिशाली बन, जसले गर्दा सिद्धिलाई स्वीकार गर्न नपरोस्, तब प्रत्यक्षता हुनेछ। नत्र सिद्धि दिनेवाला नै सिद्धिमा फँस्यौ भने फेरि के गर्ने? यी सबै कुरा यहीँबाट नै सुरु हुनु छ। बाबाको जुन गायन छ– उहाँ सर्जन पनि हुनुहुन्छ, इञ्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, वकील पनि हुनुहुन्छ, न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। यसको यथार्थता सबैले अनुभव गर्नेछन्, तब सबैतिरबाट बुद्धि हटेर एक तर्फ जानेछ। अब त तिम्रो पछाडि भीड लाग्नेवाला छ। बापदादाले त त्यो दृश्य देख्नुहुन्छ र कहिलेकाहीं अहिलेको दृश्य हेर्नुहुन्छ– धेरै फरक लाग्छ। तिमीहरू को हौ! यो त बाबाले जान्नुभएको छ। धेरै नै अनौठो पार्ट हुनु छ, जुन तिम्रो बुद्धि र सपनामा पनि छैन। केवल अलिकति रोकिएको छ! बस्। जसरी पर्दा कहिलेकाहीँ थोरै अड्किन्छ नि। झण्डा पनि लहराउँदा कहिलेकाहीँ अड्किन्छ नि। त्यसैगरी अहिले अलि-अलि अड्किएको छ। तिमीहरू जो छौ जस्ता छौ, धेरै महान छौ। जब तिम्रो विशेषता प्रत्यक्ष हुन्छ तब त इष्ट बन्नेछौ। अन्त्यमा त भक्तमाला पनि प्रत्यक्ष हुन्छ नि, तर पहिला ठाकुर सजिएर तयार होऊन् तब भक्तहरू आउनेछन्। अच्छा।
स्वयंको आरामलाई पनि त्याग गरेर सेवा गर्ने सदा सन्तुष्ट , सदा हर्षित भव
सेवाधारीले स्वयंको रात-दिनको आरामलाई पनि त्याग गर्छन् र सेवामा नै आराम महसुस गर्छन्, उनीहरूको सम्पर्कमा रहनेहरू वा सम्बन्धमा आउनेहरूले समीपताको यस्तो अनुभव गर्छन्, मानौं शीतलता वा शक्ति र शान्तिको झरनाको नजिक बसेका छौं। तिमी श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारीले कामधेनु बनेर सदाकालको लागि सर्वको मनोकामना पूर्ण गरिदिन्छौ। यस्ता सेवाधारीलाई सदा हर्षित र सदा सन्तुष्ट रहने वरदान स्वत: मिल्छ।
ज्ञान स्वरूप बन्नको लागि हर समय पढाइमा ध्यान देऊ, बाबा र पढाइसँग समान प्यार होस्।